न्याम्सको उपकुलपतिमा ६ चिकित्सकको दौडधुप
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)को उपकुलपति बन्न आकांक्षीहरूको दौडधुप सुरु भएको छ । वर्तमान पदाधिकारीहरूको चारवर्षे कार्यकाल सकिन एक साता बाँकी रहँदा उपकुलपतिका आकांक्षीको दौडधुप राजनीतिक नेतृत्वसम्म हुन थालेको हो ।
स्रोतका अनुसार उपकुलपतिमा ६ जना चिकित्सकको नाम चर्चामा छ । हालका पदाधिकारीको चारवर्षे कार्यकाल २० साउनमा सकिँदै छ ।
स्वास्थ्यमन्त्रीको रोजाइमा शाह, न्याम्सका कर्मचारी चाहन्छन् गिरी
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार न्याम्सको उपकुलपतिमा प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी र प्रा.डा. डिएन शाहको नाम बढी चर्चामा छ । स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको रोजाइमा शाह छन् । तर, न्याम्सका पदाधिकारीहरू भने शाहको सम्भावना कम भएको बताउँछन् । न्याम्सभन्दा बाहिरको व्यक्तिलाई पदाधिकारी बनाउन नमिल्ने न्याम्सको नियम छ ।
न्याम्सका एक पदाधिकारीले भने, ‘न्याम्सभन्दा बाहिरको व्यक्ति उपकुलपति वा कुनै पदमा आए त्यसको खुलेर प्रतिवाद हुनेछ । योग्य र क्षमतावान चिकित्सक न्याम्सभित्रै छन् ।’ विगतमा पनि बाहिरको व्यक्तिलाई पदाधिकारी बनाउँदा कर्मचारीले कालोमोसो दलेका थिए ।
न्याम्सका कर्मचारी गिरीलाई नेतृत्वमा ल्याउन राजनीतिक तहदेखि सरकारसम्म लबिङ गरिरहेका छन् । उनलाई कांग्रेसनिकट चिकित्सकहरूले पनि साथ दिएका छन् ।
गिरी न्याम्सका पूर्वरजिस्ट्रार, मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार, स्वास्थ्य मन्त्रालय नीति, योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय महाशाखा प्रमुख बनेर काम गरिसकेका छन् ।
चौधरी र मिश्र स्वास्थ्यमन्त्रीको दोस्रो विकल्प
डिएन शाहलाई उपकुलपति बनाउन नसके र स्वास्थ्यमन्त्रीले उपकुलपति रोज्ने मौका पाए डा. सीताराम चौधरी या डा. अनिल मिश्रमध्ये एकलाई रोज्ने सम्भावना छ । स्रोतले शाहको विकल्पमा कुरा आए मन्त्री यादवले चौधरी या मिश्रलाई अगाडि सार्ने योजना बनाएका छन् ।
कार्यकाल दोहो-याउने दाउमा गुरुङ
बहालवाला उपकुलपति प्रा.डा. गणेश गुरुङ पनि फेरि नेतृत्वका लागि लबिङमा लागेका छन् । यो कार्यकालमा केही सुधारका काम थालेकाले ती काम पूरा गर्न अर्को कार्यकाल नेतृत्व लिने कसरतमा छन् । यो कार्यकालमा न्याम्समा उनले राम्रै प्रभाव जमाएका छन् ।